Carruurta ku wax yeelloobaya dagaalka Muqdisho oo sii kordhaya – Warbixin Qaramada Midoobey. – Radio Daljir
Carruurta ku wax yeelloobaya dagaalka Muqdisho oo sii kordhaya – Warbixin Qaramada Midoobey.
Juunyo 1, 2011 12:00 b 0
Nairobi, June, 01 – Warabixn uu soo saaray ururka Qaramada Midoobey ayaa lagu sheegay in khasaaraha ka soo gaara caruurta Somaliyeed dagaalada Magaalada Muqdisho ay aad kor ugu kacday.
Hay?adda WHO ayaa sheegtay in 1590 dad dhaawac kasoo gaadhay dagaalada Muqdisho ay 46% ahaayeen caruur da?doodu ka hoseyso 5 jir ?tani waa tiradii ugu badnayd ee oo caruurta khasaaruhu kasoo gaadho dagaalada magalada Muqdisho tan iyo markii uu bilaamay sanadkaan 2011ka? sidaas waxaa yiri marthe Everard oo ah wakiilka WHO ee Somalia mar uu waramayey waakalada wararka bini,aadantinimada qaramada midoobey ee Irin.
Dhakhtar qaabilsan qaliinka oo lagu magcaabo Cumar saalax ayaa warbaahinta qaar u sheegay in khasaaraha bishii May ay u badnaayeen caruur da?doodu ka hooseyso 5 sano.
Dawladda KMG ah ee Somaliya ayaa si joogto ah ugu eedeyneysay kooxaha mintidiinta ah ee dagaalka kula jira in shacabka ay u isticmaalayaan gaashaan dadeed si ay uga gaashaantaan weerarda ciidamada dawlada iyo kuwa Amisom oo wada guluf ay kooxahaasi wadanka uga saarayaan.
Warbixntaan ay soo saartay qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in maadaama uu khasaaraha dhalaanka kasoo gaaraya dagaalada Muqdisho ay kordhayaan sidaa daraadeed loo baahanyahay in dhinaycyada dirirtu dhexmarayso ay ixtiraamaan xuquuqda bini?aadamka iyo caruurta islamarkaana ayna ku dhex dagaalamin dadka iyagoo shacabka u adeegsanaya gabaad.
Baahin: Salaasa, May 31, Weriye Axmed Jookar ~ Daljir ~ Bossaso. ?Dad Somali ah ayaa ku dhintay dagaalka maanta, qaarna waa la la?yahay? Qunsulka safaaradda Somalida ee Cadan … 5 saldhig bilays oo Galkacyo ku yaalla oo maanta dayactir iyo dib-u-habayn lagu bilaabay. … Maraakiib dagaal oo dad kallumaysato ah ka kaxaystay xeebta Kismaayo, jajabiyeyna doonyo kalluumaysati … Maamulka rugta ganacsiga ee Puntland oo xil kordhin laba sano loo sameeyey …